Aqoon isweydaarsi - Shandong OBeer Mashiinka Qalabka Co., Ltd.
Obeer waa soo saaraha ugu caansan uguna horreeya ee soosaarida qalabka soo saarida biirka ee Shiinaha, waxaan diirada saareynaa dhamaan howlaha gebi ahaanba farsamaynta, oo ay kujiraan nidaamka biirista biirka, qalabka soo saarida khamriga, iyo khadka wax soo saarka miraha.
Warshadda wax soo saarku waxay ku fadhidaa aag 8000 mitir murabac ah, oo leh afar aqoon-isweydaarsi, qalab mashiinka alxanka gaaska argon, mashiinka nadiifinta otomaatiga ah, uncoiler-ka otomaatiga ah, mashiinka foorarsiga, qalabka alxanka, iwm. Shahaadada CE, in ka badan 10 injineer, kormeere iyo brewmaster ayaa la diiwaangeliyey.
Shirkadda Obeer waxay ku adkeysaneysaa mabda'a ah "mihnaddu inay qiimeyso, adeegana ay mustaqbal samayso", raac mabda'a adeegga ee "tafaasiil la mid ah tayada", samee dadaal weyn si loo cusbooneysiiyo maaraynta iyo adeegga adeegga oo salka ku haya alaabada iyo faa'iidada tikniyoolajiyadda. Waxaan ku adkeysaneynaa ku dhaqanka iyo horumarinta aag xirfadeed, iskudayeyno sida ugu fiican si aan uga caawino macaamiisha ku guuleysiga qiimaha ugu fiican.
Si loo buuxiyo shuruudaha sare ee qalabka iyo tayada adeegga, shirkadda Obeer waxay ka gudubtay shahaadada tayada ISO9001: 2008 iyo imtixaannada shahaadada CE ee suuqa Yurub iyo Ameerika.
Iyada oo ku saleysan caqiidada "tayada sida aasaasiga ah", shirkaddu waxay si adag ugu hoggaansan tahay tiknoolajiyada wax soo saarka qalabka biirka, naqshadeynta iyo soo saarida qalabka biirka ee ku habboon macaamiisha guriga iyo dibaddaba; qalabku waa mid ku fiican shaqaynta, aadna ugu fiican waxqabadka oo si fudud loo shaqeyn karo, waana xulashada koowaad ee soo saarida biir tayo sare leh. Waxaan leenahay heerka koowaad ee horumarinta cilmiga iyo teknolojiyada, tikniyoolajiyadda wax soosaarka heerka koowaad, farsamo yaqaanno wax soo saar xirfad leh, qalab wax soo saar oo heer sare ah, waxaan sameysanay adeeg dhameystiran iibka kadib iyo dammaanad qaad, waxaanan leenahay qalab aad u fiican iyo adeegyo aad u fiican. Sanado badan oo wax soo saar iyo hawlgal ah, shirkaddu waxay ku dadaaleysaa inay bixiso mashaariic furfurasho, xaqiijiso soo iibsi hal-joogsi ah, iyo inay ku siiso adeegyo kala duwan oo buuxa.
Kusoo dhawow saaxiib khamri kasta oo noo soo booqda.